Rooney Ma Sii Ahaan Doono Ciyaaryahan Magac Wayn Hadii uu Ka Tago Man United(Gary Neville). - Cakaara News
Uk(CakaaraSport) Sabti June 29,2013.Kabtankii hore e kooxda Man United , Gary Neville ayaa u sheegay ciyaartoyga ay isku kooxda ahaan jireen ee Wayne Rooney in uu ka fiirsado go,aankiisa ku aadan ka tagitaanka kooxda Manchester United oo u ah Gabaad in uu sii jiro Magaciisa iyo in lagu magacaabo Xidig. Gary Neville ayaa ugu sheegay Taladiisa Wayne Rooney Jariirada lagu magacaabo Skysport yidhina waxaan xaqiiinayaa in Rooney uusan ahaan doonin ciyaaryahan weyn hadii uu ka tago Old Traford .
“Waxaa uu hada heystaa koox uu siduu doono ugu ciyaaro oo ah kooxda ugu sumcada badan Dalka England, waxaa uu heystaa mushaarka ugu badan ee la siiyo ciyaartooyda Premier League ka ciyaara Ingiriiska, waana la qadariyaa madama uu kooxda wax badan ugu soo ciyaaray lana soo mary Gu iyo Jiilaalba. “Waa muhuiim in uu ka fakaraa ma jirto koox uu sidaas ka noqon karo mana ahaan doono ciyaariyahan sidaan loo sharfo hadii uu ka baxo garoonka laga qadariyo hadii uu dantiisa yaqaano waa inuu la joogo kooxdiisa Man UTD.
Rooney ayaa labo jeer oo hore ka dalbaday tababaraha shaqada ka fariistay ee Alex Ferguson in la iibiyo si uu u soo waayo arko magaciisana ugu faafiyo Dalka Spain oo Christian Ronaldo Shiiqisay maaciisii Hore uu uga lahaa Old Trafold.